Dagaal beeleedyo ka jira Gobolka Mudug oo Sababay khasaare Dhimasho iyo dhaawac – SBC
Dagaal beeleedyo ka jira Gobolka Mudug oo Sababay khasaare Dhimasho iyo dhaawac
Sida ay ku waramayaan wararka ka imanaya gobolka Mudug islamarkaana ay na soo gaarsiinayaan wariye yaasha SBC ee halkaasi ku sugan waxaa Shalay galab uu dagaal ka dhacay Deegaanka Bacaadweyne ee gobolkaasi kaa oo u dhexeeyay beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega .
Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dagaalka dhexmaray labada maleeshiyo beeleed uu ahaa mid culus islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoona ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo tiro badan .
Inta la shaciyay khasaaraha dhimashada dagaalkaas ayaa kor u dhaafaya 10 qof halka in ka badan intaasna ay ku dhaawacmeyn, waxaana la soo tabinayaa in dhamaantood dadkaasi ku waxyeeloobay dagaalka ay ka kala tirsan yihiin maleeshiyaadkii dagaalamayay.
Labada maleeshiyo beedeed ee deegaanadaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay is hayeen mudooyinkii sanado ee ugu dabeysay, waxaana marar hore lagu guul darestay shirar loo qabtay oo lagu damacsanaa in dib u heshiisiin lagu dhex dhigo.
Sikastaba xaalku ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya Bacaadweyn iyo deegaano hoostaga ayaa sheegaya in ay ka jiraan xaalado kacsanaan iyo xiisado dagaal iyadoona laga baqa qabo dagaal mar kale halkaasi ku dhexmara labada maleeshiyo beel.